[SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပါဆယ်ထုပ်ပိုးခြေရာခံခြင်း | [SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] အထုပ်တည်နေရာရှာဖွေခြင်း | BT.17CKD.COM
ဆိုက်၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားပါ >> [SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပါဆယ်ထုပ်ပိုးခြေရာခံခြင်း
[SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ၏တရားဝင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်: 「www.sf-express.com」
တစ်ချိန်တည်းတွင် [SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ် ၁၀၀ အထိသင်ခြေရာခံရှာဖွေနိုင်သည်။
တစ်ကြိမ်လျှင်အများဆုံးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ် ၁၀၀ ကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးအတန်းတစ်ခုစီတွင်ခြေရာခံဂဏန်း ၁ လုံးသာရှိနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းအရေအတွက် ၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်ပါကအများဆုံးခွင့်ပြုထားသောအရေအတွက်ထက်ကျော်လွန်သောအထုပ်များသည်အလိုအလျောက်လျစ်လျူရှုပြီးဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
「 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုထည့်ပါ:0」
အားလုံး မတွေ့ပါ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေဆဲ ... အထုပ်ကို၎င်း၏ ဦး တည်ရာသို့ပို့ဆောင်ပြီးပါပြီ! အထုပ်ကိုထွက်ခွာရာနေရာသို့ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ! အထုပ်အားအကောက်ခွန်ကယာယီစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးခဲ့သည်! အခြားမူမမှန်မှုမျာ!
နံပါတ်စဥ် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံနံပါတ် ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့မှုအခြေအနေ သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ် နောက်ဆုံးပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံအချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောနေ့စွဲနှင့်အချိန် ထွက်ခွာချိန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏စုစုပေါင်းအချိန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာ နောက်ဆုံးပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခြေရာခံသတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ကြည့်ပါ
「 ဤခလုတ်ကို သုံး၍ ကူးယူထားသောအကြောင်းအရာအတွက်စာလုံးရေအကန့်အသတ်မရှိ။ သင်ကူးယူထားသောအကြောင်းအရာများကိုအီးမေးလ်များ၊ txt စာရွက်စာတမ်းများ၊ Office Word စသည်ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။
အထုပ်အရေအတွက်စုစုပေါင်း ၁၅ ထက်ကျော်လွန်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကူးယူထားသောအကြောင်းအရာကိုလူမှုဆော့ဝဲ၏ချက်တင်ဒိုင်ယာလော့ခ်တွင်မသုံးပါနှင့်။, ပရိုဂရမ်အများစုတွင်တင်းကျပ်သောစကားလုံးကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ 」
「အထုပ်အရေအတွက်စုစုပေါင်း ၁၅ ထက်မပိုလျှင် ဤဘာသာပြန်ခလုတ်ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Google Translator ရဲ့စာလုံးအရေအတွက်ကအက္ခရာ ၅၀၀၀ သာကန့်သတ်ထားလို့ပါ။ 」
「မင်းရဲ့အထုပ်အရေအတွက်က ၁၅ ထက်ကျော်နေလို့, သင်သတ်မှတ်ထားသောအထုပ်ခြေရာခံအချက်အလက်များကိုကူးယူရန်သို့မဟုတ်ဘာသာပြန်ရန်အောက်ပါအထူးလုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။, ကွဲပြားသောအမှတ်စဉ်နံပါတ်များသည်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော function ခလုတ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။. ↓」
↓ အထုပ်ခြေရာခံသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာရန်သော့ချက်စာလုံးများရိုက်ထည့်ပါ ↓
「 သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ကိုက်ညီသောအထုပ်အရေအတွက်စုစုပေါင်း0」
↓ သင်၏အထုပ်တင်ပို့မှု၏ကြန့်ကြာသောအချိန်ကိုထည့်ပါ ↓
ရက် / နာရီ / မိနစ် / စက္ကန့်.
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေအားအောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်။: * ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှောင့်နှေးသည်.
စာရင်း၏နောက်ခံအရောင်ကိုမူလအရောင်သို့ပြန်ပြောင်းရန် [နှောင့်နှေးအမှတ်အသားကိုဖယ်ရှားပါ] ခလုတ်ကိုသင်နှိပ်နိုင်သည်။
「 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွင်နှောင့်နှေးနေသောအထုပ်အရေအတွက်စုစုပေါင်း0」
「 ကုမ္ပဏီအကြောင်း 」: SF Express သည် e-commerce ၀ ယ်သူများအတွက်တစ်နေရာတည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများဖန်တီးရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ရုံနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်အရင်းအမြစ်များကိုမှီခိုအားထားနေရသည်။ SF Express သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမြန်ထုတ်ကုန်များနှင့်တန်ဖိုးမြှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာမှတဆင့် ၀ ယ်သူများ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရင်းအမြစ်များကိုမှီခိုအားထားနေရသည်။
「 တရားဝင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက် 」: www.sf-express.com
「 ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းဖော်ပြချက် - 1 」: ကွဲပြားခြားနားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေများကိုကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံအရောင်များဖြင့်အမှတ်အသားပြုထားသည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်အရေအတွက်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေအမည်အောက်တွင်ပြထားသည်။ သင်ပြသောနံပါတ်ကိုနှိပ်လိုက်လျှင်စာရင်း၏နောက်ခံအရောင်သည်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
(1) “မတွေ့ပါ” -> နောက်ခံအရောင်သည်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်,
(2) “ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေဆဲ ...” -> နောက်ခံအရောင်မှာလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်,
(3) “အထုပ်ကိုထွက်ခွာရာနေရာသို့ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ!” -> နောက်ခံအရောင်သည်အနီရောင်ဖြစ်သည်,
(4) “အထုပ်ကို၎င်း၏ ဦး တည်ရာသို့ပို့ဆောင်ပြီးပါပြီ!” -> နောက်ခံအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်,
(5) “အထုပ်အားအကောက်ခွန်ကယာယီစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးခဲ့သည်!” -> နောက်ခံအရောင်သည်ခရမ်းရောင်ဖြစ်သည်,
(6) “အခြားမူမမှန်မှုမျာ!” -> နောက်ခံအရောင်မှာအပြာရောင်ဖြစ်သည်.
「 ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းဖော်ပြချက် -2」: မင်းဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပြီးတစ်ရက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်တွေကိုခြေရာခံပြီးရှာဖွေတဲ့အခါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့စနစ်ကမင်းရဲ့ browser မှာလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကိုလုပ်လိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ ၆ စက္ကန့်ကနေ ၁၀ စက္ကန့်လောက်စောင့်ရမယ်။
(1) စနစ်ခြေရာခံရှာဖွေမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ဤပုံကိုသင်မြင်လျှင်: " ", ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ခြေရာခံသည့်အကျင့်သို့မဟုတ် IP လိပ်စာသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်ဝဘ်စာမျက်နှာများစွာကိုဖွင့ ်၍ ၎င်းတို့ကိုမကြာခဏသုံးသည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ထို့ကြောင့်စနစ်ကသင့်စက်အားဤ ၀ က်ဆိုက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှတားဆီးပေးသည်။
(2) စနစ်ခြေရာခံရှာဖွေမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ဤပုံကိုသင်မြင်လျှင်: " ", ဆိုလိုသည်မှာဤဝဘ်ဆိုက်၏ဆာဗာသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမပြီးပြတ်သေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ စာမျက်နှာကိုပြန်လည်မစခင် ၁ မိနစ်ခန့်စောင့်ပြီးထပ်ကြိုးစားပါ။
「 ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းဖော်ပြချက် -3」: ခြေရာခံရှာဖွေမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ခြေရာခံသတင်းအချက်အလက်ကိုမရှာဖွေနိုင်သောအနည်းဆုံးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ် ၁ ခုရှိလျှင် [နက်ရှိုင်းသောခြေရာခံ] ခလုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကမင်းကိုအကြာကြီးစောင့်ဖို့လိုအပ်နိုင်တယ်။
「 အကူအညီဖော်ပြချက် 」: မင်း [SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ရဲ့တရားဝင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်မှာမင်းရဲ့ပါဆယ်ခြေရာခံအချက်အလက်တွေကိုမင်းရှာနိုင်ရင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပြီးပါဆယ်ထုပ်လမ်းကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်မင်းဒီအခြေအနေကိုအီးမေးလ်ကနေငါ့ကိုပြောနိုင်ပါတယ်။: "emmis@qq.com".
အီးမေးလ်၏အကြောင်းအရာပုံစံ: "[SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အသေးစိတ် URL" + "[SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] အထုပ်လိုက်ခြေရာခံနံပါတ် ၃ ခုပေးပါ။
(ဤအထုပ် ၃ ခုပါခြေရာခံဂဏန်းများသည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သုံး၍ အထုပ်ခြေရာခံအချက်အလတ်များကိုရှာဖွေနိုင်သဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည် ဦး တည်ရာသို့ပို့ဆောင်ပေးသောပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေတွင်ရှိရမည်။)".
「 ဥပဒေအကြောင်းမှတ်စုများ 」: ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည် [SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ၏တရားဝင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မပါ ၀ င်ပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်များကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးအခမဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်ခြေရာခံ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
သင်၏ [SF/ S.F. Express/ SF Express မှ] ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ 「www.sf-express.com」.